ဆိုးရှား အပေါ် ပရိသတ်တွေ ဘယ်လောက်စိတ်ပျက်နေပြီလဲ - xyznews.co
ဆိုးရှား အပေါ် ပရိသတ်တွေ ဘယ်လောက်စိတ်ပျက်နေပြီလဲ
နိုင်ငံတကာ ပွဲစဉ် ကာလတွေဟာ ကလပ်အသင်းတွေ အတွက် အနားယူ အားမွေးပြီး ပြန်လည် စတင်မယ့် ပွဲတွေ အတွက် ပြင်ဆင်ရမယ့် အချိန်ကာလပါ ။ ဒီလို အချိန်မှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကတော့ တပတ် အထိ အနားပေးခဲ့ ပါတယ် ။ နည်းပြ ဆိုးရှား ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ဟာ အသင်းသားတွေကိုတောင် အံ့အားသင့်စေ ခဲ့တာပါ ။ ဆိုးရှား ကိုယ်တိုင် ကတော့ အနားပေးကြောင်း အတည်ပြုပြီး မကြာခင် မှာဘဲ မိသားစုနဲ့ အတူ နော်ဝေကို ပြန်သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဆိုးရှား အတွက်တော့ ဒီ ပိတ်ရက်တွေဟာ ဖိအားဒဏ်တွေကို ပြန်လည် ကုစားဖို့ လုံလောက်ချင်မှ လုံလောက် မှာပါ ။ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ဒီရာသီ အနေအထားတွေက မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်လို့ နေခဲ့ပါတယ် ။ ရလဒ်တင် မဟုတ်ပါဘူး ၊ အနိုင်ရတဲ့ ပွဲတွေမှာတောင် ကစားပုံတွေ က ကျေနပ် အားရစရာ မရှိ ဖြစ်နေခဲ့တာပါ ။
တကယ်လို့ ရိုနယ်ဒို ရဲ့ ကယ်တင်မှုတွေသာ မရှိခဲ့ဘူး ဆိုရင် ယူနိုက်တက် တို့ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ နိုင်ပွဲတောင် ရဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ရိုနယ်ဒို ရဲ့ ကယ်တင်ခြင်းတွေ ကလည်း ဗျူဟာမြောက် ကစားကွက်တွေ မဟုတ်ဘဲ ဖြတ်တင်-ခေါင်းတိုက် ၊ ကျလာ-လှမ်းကန်-ဂိုးဝင်တွေ ချည်း ဖြစ်နေခဲ့တာပါ ။ ဒါကြောင့် နိုင်တဲ့ ပွဲတွေမှာတောင် ပရိသတ်တွေကို ပျော်ရွှင်ခွင့် မပေးခဲ့ပါဘူး ။
တီဗွီ ပိတ်လိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ ၊ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ကနေ ပြန်လာကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ ၊ ကွင်းထဲကနေ ထ ထွက်လာကြသူတွေ အားလုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာ “နောက်ပွဲကျရင် ဘာတွေဖြစ်ဦးမလဲ မသိဘူး” ဆိုတဲ့ အတွေးတွေ စိုးမိုး နေမှာ အသေအချာပါပဲ ။
ယူနိုက်တက် ရဲ့ အခြေအနေက အဲ့ဒိလောက်အထိကို ဆိုးရွားနေခဲ့ပါပြီ ။
နာမည်ကျော် သတင်းဌာန The Athletic ရဲ့ စစ်တမ်း ကောက်ယူမှု အရ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ထက်ဝက်ကျော်ဟာ ဒီရာသီ မစခင်အထိ ဆိုးရှား ကို နည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်တာဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ အရာ တခုလို့ ထောက်ခံ ထားခဲ့ကြပါတယ် ။
ကျန်တဲ့ သူတွေထဲက ၄၀% နီးပါး ကလည်း ဆိုးရှား ကို ယူနိုက်တက် နည်းပြအဖြစ် မြင်နေရတာကို ပြဿနာ မရှိဘူး လို့ သတ်မှတ်ထားကြပြီး ၁% လောက်သာ နော်ဝေသား အပေါ် အမြင်မကြည် ဖြစ်နေခဲ့ ကြတာပါ ။
ဒါပေမယ့် ဒီနှစ် ဘောလုံး ရာသီ စတင် အပြီး လ အနည်းငယ် အကြာမှာဘဲ ဒီရာခိုင်နှုန်းတွေဟာ အထက်အောက် ပြောင်းပြန်တွေ ဖြစ်ကုန် ခဲ့ပါတယ် ။
အခုနောက်ဆုံး စစ်တမ်း မှာတော့ ယူနိုက်တက် ပရိသတ် ၉၀% နီးပါး ဟာ ဆိုးရှား ကို ဆိုးရွားတဲ့ အလုပ်တခု အဖြစ် သတ်မှတ်လာကြပြီး ထောက်ခံမဲက ၁% လောက်သာ ကျန်ရှိပါတော့တယ် ။ အဲ့ဒိ ၁% ဆိုတာ မန်ချက်စတာ ဒါဘီ တုန်းက ကွင်းထဲမှာ အိုလေး – အိုလေး လို့ အော်ဟစ် အားပေးနေသေးတဲ့ ပရိသတ်တွေ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နေမှာပါ ။
ယူနိုက်တက် ဟာ ဆိုးရှား လက်ထက်မှာ အမှန်တကယ် တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ် ။ သူ ကိုင်ခဲ့တဲ့ ၃ ရာသီ အတွင်းမှာ ယူနိုက်တက် ဟာ ရှုံးထွက် ဖလားတွေ နဲ့ လက်တကမ်း အထိ ရောက်ခဲ့ပြီး မနှစ်က ဆိုရင် အမှတ်ပေး ပြိုင်ပွဲမှာ အဆင့် ၂ ၊ ယူရိုပါလိဂ် မှာ ဒုတိယ တို့ ရခဲ့တာပါ ။ ဒါကြောင့်လည်း ထောက်ခံမဲတွေ ရခဲ့တာပါ ။
ဒီရာသီမှာတော့ အစဉ်အဆက် တိုးတက်မှုကို မျှော်လင့်ထားတဲ့ ပရိသတ်တွေဟာ အနည်းဆုံး မနှစ်ကလောက် အနေအထားမျိုးကို ပြန်ရောက်ဖို့ကို တွေးတော ထားကြပါတယ် ။ နွေရာသီ အားဖြည့်မှုတွေ ကလည်း ဒီအနေအထားထက် မကျော်ရင်တောင် မနိမ့်လောက်တဲ့ အခြေအနေမျိုး ကို ရယူနိုင်ဖို့ လုံလောက် နေခဲ့တာပါ ။ ဒါပေမယ့် ၃ လ အကြာမှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ ပုံစံတွေက ဒီမျှော်လင့်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို ပရိသတ်တွေ သိနားလည် လာခဲ့ပါပြီ ။ ဒါကြောင့် ထောက်ခံမှုတွေ ကနေ ကန့်ကွက်မှုတွေ အဖြစ် ရုတ်ချည်း ပြောင်းလဲ သွားခဲ့ရတာပါ ။
ဒီလို ဖြစ်ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းက ဘာလဲ . . . Athletic ရဲ့ စစ်တပ်းမှာတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ၇၀% ဟာ ဆိုးရှား ရဲ့ နည်းစနစ် မကြွယ်ဝမှု ၊ နည်းဗျူဟာ အပြောင်းအလဲ မပြုလုပ် နိုင်မှုတွေဟာ အသင်းရလဒ်တွေ ဆိုးရွား နေရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းလို့ ဆန္ဒပြုခဲ့ ကြပါတယ် ။ တကယ်တမ်း မှာလည်း ဆိုးရှား ဟာ ခံစစ်အထိုင်ချ ၊ တန်ပြန် တိုက်စစ်နဲ့ ကစားတဲ့ တမျိုးတည်းကိုသာ သုံးတတ်သူလို့ ဆိုရလောက်အောင်ကို နည်းဗျူဟာ ရိုးရှင်း နေပြီး ဘယ်သူတွေ ဝင် ကစားမယ် ၊ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်သူတွေနဲ့ လူစားလဲမယ်ဆိုတာ ကို အတိအကျ ခန့်မှန်း နိုင်လောက်တဲ့ အထိ ရိုးရှင်း နေခဲ့ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် လည်း အခုလို မဲရလဒ် ထွက်လာခဲ့တာ အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။
ယူနိုက်တက် မှာ ဖာနန်ဒက်စ် ၊ ပေါ့ဘာ ၊ ဗန်ဒီဘိ တို့လို နည်းစနစ် ကျွမ်းကျင်တဲ့ ကစားသမားတွေ ရှိသလို ဆန်ချို ၊ ရက်ဖိုဒ့် တို့လို လျှင်မြန်မှုရော ကျွမ်းကျင်မှုပါ အားကောင်းတဲ့ တောင်ပံ ကစားသမားတွေ ပိုင်ဆိုင် ထားပါတယ် ။ ခံစစ်ကလူတွေ ကလည်း လက်ရွေးစင် အဆင့်တွေဖြစ်ပြီး ဗာရန်း တို့လို ဝါရင့် ချန်ပီယံတွေ ရှိနေခဲ့တာပါ ။ ဒီလူတွေ ကို ခံစစ်-တန်ပြန် တမျိုးတည်း ကစားခိုင်းတာကတော့ ဆိုးရှား အလွန်လို့ပဲ ဆိုရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီလိုမျိုး အသင်းရဲ့ ရလဒ်တွေ ယိမ်းယိုင် ဆိုးရွား နေပေမယ့် အိုလေ ဂန်နာ ဆိုးရှား ဟာ ကျဆင်းမှုတွေရဲ့ အဓိက တရားခံ လို့ ပရိသတ်တွေက မသတ်မှတ် ထားကြပါဘူး ။ ဆိုးရှား ကို ထိပ်တန်း အဆင့်မှာ မရှိတဲ့ နည်းပြတယောက် အဖြစ်သာ လက်ခံ ထားကြပြီး အပြောင်းအလဲတွေ ပြုလုပ်ဖို့ ဆိုရင်တော့ အသင်းပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဂလေဇာ မိသားစု မှာသာ အဓိက တာဝန်ရှိကြောင်း ပရိသတ် ၆၅% က မဲပေးခဲ့ကြပါတယ် ။ ဆိုးရှား ကတော့ ဒုတိယ တာဝန်အရှိဆုံး ဖြစ်ခဲ့တာပါ ။
အဆုံးသတ် ပြောရရင်တော့ လက်ရှိ နော်ဝေသားရဲ့ အခြေအနေက ဆိုးရွားနေပါပြီ ။ ဘုတ်အဖွဲ့ နဲ့ ဂလေဇာ မိသားစုက ထောက်ခံ နေသေးပေမယ့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ထောက်ခံမှုကတော့ လုံး၀ ပျောက်ဆုံး နေခဲ့ပါပြီ ။ Athletic မှာ ပရိသတ် ၆၉% ဟာ ဆိုးရှား ကို ချက်ချင်း ထွက်သွားဖို့ လိုလားနေပြီး ၁၅% ကတော့ ရာသီ အကုန်မှသာ ထုတ်ပယ်ဖို့ မဲပေးခဲ့ ကြပါတယ် ။
သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ ယူနိုက်တက် ဘုတ်အဖွဲ့ ဟာ အခြားအသင်းကြီး ဘုတ်အဖွဲ့တွေထက် စိတ်ရှည် ခဲ့တာကို မြင်ခဲ့ရ ပါတယ် ။ မိုရက်စ် ၊ ဗန်ဟား နဲ့ မော်ရင်ဟို တို့ ၃ ဦး စလုံးဟာ အခု ဆိုးရှား ရင်ဆိုင်ရသလိုမျိုး ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ပျက်မှုတွေကို ခံခဲ့ရ ပေမယ့် ၃ ယောက်စလုံးဟာ လိုတာထက် ပိုပြီး သက်တမ်း ရှည်ခဲ့ကြပါတယ် ။
မိုရက်စ် ကို ရာသီကုန်ခါနီး မှ ( ရလဒ်တွေ အရေးမပါတော့မှ ) ထုတ်ပယ် ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး လူးဝစ် ဗန်ဟား ဆိုရင် FA Cup ကိုတောင် ကိုင်ခွင့် ရသွားခဲ့ ပါတယ်
။ မော်ရင်ဟို ကို ရာသီဝက် နဲ့ ထုတ်ခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့် ပေါ်တူဂီသားဟာ အောက်တိုဘာလောက် တည်းက အခု ဆိုးရှား ကြုံရသလို ဖိအားမျိုး နဲ့ ရင်ဆိုင် နေခဲ့ရတာပါ ။
ဒါကြောင့် အခုလည်း ဆိုးရှား ထုတ်ခံရမယ် ဆိုရင်တောင် ဇန်နဝါရီလောက်မှ ဖြစ်နိုင်ပြီး ရာသီကုန်မှ ထုတ်ပယ်တာကတော့ ဖြစ်နိုင်ချေ အများဆုံးပါပဲ ။ ပရိသတ်တွေ ပြောချင်ရာပြော ဆိုပြီး မျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့ လုံး၀ မထုတ်ဘဲ ဆက်ထားသွားဖို့လည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။
Previous Article လန်ဒန်ကော်နေး လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ အာဆင်း ရဲ့ ဓါတ်ပုံ အကြီးကြီး ထားထားတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ရှင်းပြလိုက်တဲ့ အာတီတာ